The Gardener: ဆာလောင်၊ရူးသွပ် သွားလေသူကြီး အမှတ်တရ။ (ပထမပုံပြင်)
ဆာလောင်၊ရူးသွပ် သွားလေသူကြီး အမှတ်တရ။ (ပထမပုံပြင်)
၂၀၀၅ တုန်းကပုံပြင်တွေပါ။ Stanford ဘွဲ့နှင်းသဘင်မှာ Steve Jobs ဟောပြောတာပါ။ ဖတ်ဖြစ်တာတော့ကြာပြီ။ စတိဂျော့ဘ်စ် မသေသေးလို့ ဘာသာမပြန်သေးတာ။ အခုတော့ အမှတ်တရဖြစ်စရာလေးတွေ ဖြစ်ရတာပေါ့။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကောင်ဆုံး တက္ကသိုလ်ကြီးမှာ ဘွဲ့နှင်းသဘင်ကို တက်ရောက်ခွင့်ရတဲ့အတွက် ကျွန်တော် ၀မ်းသာဂုဏ်ယူမိတယ်။ ကျွန်တော်က ကောလိပ်ကနေဘွဲ့မရခဲ့ဘူး။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ဘွဲ့ရခြင်းနဲ့ အနီးဆုံးအနေအထားရောက်ဖူးတာ အခုအချိန်ပါပဲ။ (လူများတွေကို ဘွဲ့ပေးနေတာဆိုတော့ သူလို ဘွဲ့မရဘူးတဲ့လူအတွက် အခုအခမ်းအနားဟာ ဘွဲ့နဲ့အနီးဆုံးပဲဆိုပြီး အရွှန်းဖောက်တာပါ။) ဒီနေ့ ကျွန်တော့်ဘ၀ရဲ့ ပုံပြင်သုံးပုဒ်ကိုပြောပါမယ်။ နည်းနည်းပါးပါးပဲ။ သိပ်အရေးတကြီးတွေမဟုတ်ဘူး။ ပုံပြင်လေးသုံးပုဒ်ပါပဲ။
ပထမဆုံးပုံပြင်ကတော့ အမှတ်စက်လေးတွေကို ဆက်သွယ်တဲ့အကြောင်းပါ။
အမှတ်စက်လေးတွေဆက်သွယ်တယ်ဆိုတာကို ငယ်တုန်းက ကလေးစာအုပ်တွေနဲ့ကြီးလာတဲ့ ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ အမှတ်ကလေးတွေ ဆက်ဆွဲပြီး အရုပ်ကလေးတွေဖြစ်လာတာတွေဘာတွေ တေဇတို့ မိုးသောက်ပန်းတို့မှာပါလေ့ရှိတယ်။ တို့ကျောင်းသားမှာတော့ ပါမပါမသိဘူး။ နောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ ပလုတ်တုတ်တို့ဘာတို့မှာလည်း တခါတလေပါတတ်သေးတယ်ထင်တယ်။ မေ့နေကြသူတွေအနေနဲ့လည်း အန်ကယ် ၀ီကီဆီမှာမေးလို့ရပါတယ်။ ၀ီကီကို အန်ကယ်လို့ပြောတာ ဂျန်ဒါခွဲတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အန်တီ ၀ီကီဆိုလည်း ဖြစ်လောက်ပါတယ်။ အောက်က ၀ီကီလင့်ခ်ကို ကလစ်ခေါက်ကြည့်ရင်လည်း ပြန်ပြီး မီးသီးလေးလင်းသွားနိုင်ပါတယ်။http://en.wikipedia.org/wiki/Connect_the_dots
ရိဒ်ကောလိပ်ကနေ ခြောက်လအကြာမှာ ကျွန်တော်ကျောင်းထွက်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျောင်းနားမှာပဲနေရင်း နောက်ထပ် ၁၈ လလောက်နေ ဟိုအတန်းဝင်တက်၊ ဒီအတန်းဝင်တက်ပြီးမှ တကယ် ထွက်ခွာလာတယ်။ ဘာလို့ ကျွန်တော်ကျောင်းထွက်ခဲ့တာလဲ။
ဒီအဖြစ်အပျက်က ကျွန်တော်မမွေးခင်ကစတာ။ ကျွန်တော့်ကို တကယ်မွေးလိုက်တဲ့အမေက ငယ်ရွယ်ပြီး၊ လက်မထပ်ရသေးတဲ့ ကောလိပ်ကျောင်းသူဗျ။ သူက ကျွန်တော့်ကို သူများတွေမွေးစားဖို့ပေးလိုက်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ သူက ကျွန်တော့်ကို ဘွဲ့ရမိသားစုကမွေးစားစေရမယ်လို့ယုံကြည်ထားခဲ့တယ်။ အဲဒါက လုံးဝစီစဉ်ပြီးသား။ ကျွန်တော်မွေးတာနဲ့ ရှေ့နေတစ်ယောက်နဲ့ သူ့မိန်းမက မွေးစားလိုက်ဖို့ပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် တကယ်မွေးလာတော့ သူတို့တွေက မိန်းကလေးမှ လိုချင်တာဖြစ်သွားတယ်။
အဲဒါနဲ့ အခုမိဘတွေဖြစ်လာမယ့် သူတွေက စောင့်ဆိုင်း စာရင်းထဲမှာရှိနေတော့ သူတို့ကို ညလယ်သန်းခေါင်ဖုန်းခေါ်ပြီး "ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ မွေးစားချင်မွေးစားလို့ရတဲ့ ယောကျာ်းကလေးတစ်ယောက် (မိဘကတော့ မလိုချင်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်။) ရှိတယ်။ ခင်ဗျားတို့ လိုချင်လား။"လို့သူတို့ပြောကြတယ်။ ကျွန်တော့်မွေးမိခင်က အဲဒီ မွေးစားချင်တဲ့အမျိုးသမီး(အခုလက်ရှိကျွန်တော့်အမေ)က ကောလိပ်ကနေဘွဲ့မရခဲ့ဘူး၊ မွေးစားမယ့် အမျိုးသား(အခုလက်ရှိ ကျွန်တော့်အဖေ)က အထက်တန်းကျောင်းက အောင်လက်မှတ်မရခဲ့ဘူး ဆိုတာသိတော့ မွေးစားခွင့်ကို လက်မှတ်မထိုးပေးဘူး။ နောက်လအနည်းငယ်ကြာမှ မွေးစားမိဘတွေက ကျွန်တော့်ကို ကောလိပ်ပို့ပါမယ်ဆိုတဲ့ကတိပေးလို့ မွေးမိခင်ကြီးက စိတ်လျှော့ပြီးလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်တော့တယ်။
နောက်ထပ် ၁၇ နှစ်ကြာတော့ ကျွန်တော်တကယ်ပဲ ကောလ်ိပ်ကျောင်းတက်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော် မိုက်မိုက်မဲမဲ တုံးတုံးတာတာနဲ့ စတန်းဖို့ဒ်လောက်ဈေးကြီးတဲ့ ကောလိပ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့မိတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ လက်လုပ်လက်စားမိဘတွေရဲ့စုငွေဆောင်းငွေတွေဟာ ကောလိပ်ကျာင်းစရိတ်နဲ့ ပြောင်တာပဲ။ ခြောက်လကြာတော့ ကျွန်တော် ကျောင်းတက်တာ ဘာမှ အကျိုးမရှိဘူးထင်လာတယ်။ ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာ ကျွန်တော်မသိဘူး။ ကောလိပ်ကျောင်းကြီးကရော ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ချင်တယ်၊ ဘာလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာကို ဘယ်လို ကူပြီးရှာဖွေစဉ်းစားပေးမယ်လာဆိုတာကိုလည်း မသိဘူး။
ကျွန်တော်အဲဒီမှာ မိဘတွေ တစ်သက်လုံးစုထားသမျှ ချွေးနှဲစာတွေကို သုံးဖြုန်းပစ်နေတာ။ (ကျောင်းမှာ စာလည်းသေချာမလုပ်တဲ့ အသုံးလည်းမကျလှတဲ့ ပေကပ်ကပ်နဲ့ကျောင်းတက်စားနေတဲ့ကောင်တွေဖတ်ပြီး ကျောင်းထွက်သင့်တယ်။ မိဘပိုက်ဆံကို အချောင်ထိုင်ဖြုန်းနေတဲ့ လူမျိုးတွေ။) ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ကျောင်းထွက်လိုက်တယ်။ ကျောင်းထွက်လိုက်ပေမယ့် အားလုံးအဆင်ပြေအောင် လုပ်နိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော်ယုံကြည်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်ကတော့ ဒါဟာ တကယ့်ကို သွေးပျက်စရာကောင်းတယ်ဗျ။ ဒါပေမယ့် အခုအချိန်ပြန်တွေးရင်တော့ ဒါဟာ ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သမျှတွေထဲမှာ အကောင်းဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုပဲ။ ကျောင်းထွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲ ကျွန်တော်စိတ်မပါတဲ့ အတန်းတွေ လုံးဝသွားစမတက်တော့ဘဲ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပုံရတဲ့ အတန်းတွေပဲဆက်တက်နေလိုက်တယ်။
အားလုံးက စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန် အေးအေးဆေးဆေး အဆင်ပြေပြေဖြစ်နေခဲ့တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော့်မှာ ကျောင်းတက်ဖို့ပေးနေတဲ့ အခန်းမရှိတော့ဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အခန်းက ကြမ်းပြင်တွေမှာအိပ်ခဲ့ရတယ်။ Coke အချိုရည်ပုလင်းတွေကို ပြန်သွင်းပြီး ရတဲ့ ငါးပြားတွေနဲ့ အစာစားဖို့ ပိုက်ဆံရှာရတယ်။ ခုနစ်မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ Hare Krishna ကျောင်းမှာ အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့ညတွေမှာ ကျွေးတဲ့ စားကောင်းသောက်ဖွယ်လေးတွေ သွားစားခဲ့ရတယ်။ ကျွန်တော်ဒါကို သိပ်ကိုသဘောကျတယ်။ကျွန်တော့်ရဲ့ စူးစမ်းလိုစိတ်နဲ့ အလိုလိုသိစိတ်တွေနောက်ကို လိုက်ပါရင်း ချော်တောငေါ့တာတွေ၊ လမ်းကြောင်းပြောင်းခဲ့ရတာတွေ အများစုဟာ နောက်ပိုင်းမှာ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ရလဒ်တွေအဖြစ်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကို ဥပမာတစ်ခုပေးပါရစေ၊ ရိဒ်ကောလိပ်ဟာ အဲဒီအချိန်က နိုင်ငံမှာ အကောင်းဆုံးလို့တောင်ပြောလို့ရနိုင်တဲ့ စာလုံးအလှရေးတဲ့ သင်တန်းကို ပို့ချပါတယ်။ ကျောင်းဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ ပိုစတာတွေ၊ တံဆိပ်တွေ၊ ပုံတွေအားလုံးဟာ လှလှပပ လက်ရေးတွေနဲ့ စာလုံးအလှဆင်ထားကြတယ်ဗျ။
ကျောင်းထွက်ပြီး ပုံမှန်အတန်းတွေ တက်စရာမလိုတဲ့အတွက် ကျွန်တော် အဲဒီ စာလုံးအလှရေးတဲ့သင်တန်းကိုတက်ပြီး ဒါကို ဘယ်လို လုပ်လဲဆိုတာကို သင်ယူခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော် serif တွေ san serif typefaces တွေအကြောင်း လေ့လာတယ်။ စာလုံးတွေကြားက အစုအကျဲတွေပြောင်းလဲမှုတွေကို သင်ယူတယ်။( serif ဆိုတာကတော့ စာလုံးကို ဘယ်ကနေစရေးပြီး ဘယ်မှာဆုံးလဲဆိုတာမျိုးတွေ၊ အရေးအသားထုံးတွေ၊ စံတွေပါပဲ။ typefaces ဆိုတာတော့ အလှရေးထားတာတဲ့စာလုံးတွေပေါ့ဗျာ။ san serif ဆိုတာတော့ serif မှာ အသတ်လေးတွေဖျောက်ထားတာမျိုး။ wiki မှာရှိတယ်။ သေချာကွဲပြားအောင် ပြထားတာလည်းရှိတယ်။http://en.wikipedia.org/wiki/Sans-serif) တကယ့်ကိုကောင်းတဲ့ စာလုံးအရေးအသားပုံစံတွေမှာ သူတို့ကို ဘယ်ဟာက တကယ့်ကိုကောင်းစေတာလဲဆိုတာမျိုးကိုလေ့လာခဲ့ရသဗျ။ ဒါတွေဟာ လှပတယ်ဗျာ၊ သမိုင်းဆန်ဆန်ရှေးကျတယ်၊ သိပ္ပံကလိုက်မမီလောက်အောင် အနုပညာမြောက်ပြီးလှပတယ်။ အဲဒါကို ကျွန်တော် စိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်။
ဒါတွေကနေ ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ အသုံးကျတာတစ်ခုခုလုပ်နိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော်မမျှော်လင့်ခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆယ်နှစ်ကြာတော့ ကျွန်တော်တို့ ပထမဆုံး မက်ကင်းတော့ရှ် ကွန်ပြူတာကို ဒီဇိုင်းဆင်ကြတော့ ဒါတွေဟာ ကျွန်တော့်အတွက်ပြန်ုပြီးအသုံးဝင်လာတယ်။ ကွှန်တော်တို့ဟာ ဒါတွေ(သိပ်လှပြီးသပ်ရပ်တဲ့ fontတွေ) ကို Mac မှာ အားလုံးထည့်ပစ်တာပဲ။ အဲဒီ Mac ဟာ လှပတဲ့စာစီစာရိုက်စနစ်ပါတဲ့ ပထမဆုံးကွန်ပြူတာဖြစ်လာခဲ့တယ်။ တကယ်လို့များ ကျွန်တော် ကောလိပ်မှာ အဲဒီစာလုံးအလှရေးသင်တန်းမတက်ခဲ့မိရင် Mac မှာ ဖောင့်ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုး၊ ဒါမှမဟုတ် အချိုးညီ အကွာအဝေးခြားနိုင်တဲ့ ဖောင့်စနစ်တွေ ရှိလာမှာမဟုတ်ဘူး။ ၀င်းဒိုးကတော့ Mac ဆီက ကူးချတာဆိုတော့ ကျွန်တော်များ အဲဒီသင်တန်းမတက်ခဲ့မိရင် ဘယ်တကိုယ်ရေသုံးကွန်ပြူတာမှာမှ ဒီလို လှပတဲ့ ဖောင့်စနစ်ရှိမှာကိုမဟုတ်ဘူး။ (ထုံးစံအတိုင်း Windows ကို တစ်ချက်ထုလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။)
တကယ်လို့ ကျွန်တော်ကျောင်းမထွက်ခဲ့ရင်လည်း အဲဒီ စာလုံးအလှရေးတဲ့အတန်းကို ဘယ်တော့မှ တက်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီလိုမတက်မိခဲ့ရင် တကိုယ်ရေသုံးကွန်ပြူတာတွေရဲ့ လှပတဲ့ စာစီစာရိုက်စနစ် အခုရှိနေသလို ရှိနေမှာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီတော့ဗျာ၊ ကျွန်တော် ကောလိပ်ကျောင်းသားဘ၀က အဲဒီ အမှတ်စက်ကလေးတစ်စက်ဖြစ်တဲ့ ကျောင်းထွက်ပြီး စာလုံးအလှရေးတဲ့အတန်းတက်ခြင်းဆိုတာလေးကို မဆက်စပ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် နောက်ထပ် ဆယ်နှစ်အကြာမှာ ပြန်ကြည်တော့ အဲဒီ အမှတ်စက်လေးကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရ၊(ဆက်စပ်နိုင်) တော့တာပါပဲ။
ထပ်ပြီးပြောရရင် အခုလုပ်ရပ်က ရှေ့မှာဘာတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ အမှတ်စက်ကလေးတွေကို ခင်ဗျားတို့ ကြိုပြီး မဆက်စပ်နိုင်ဘူး။ နောက်ကိုပြန်ကြည့်မှသာ ဘာတွေ ဆက်စပ်နိုင်ပြီလဲဆိုတာသိနိုင်တယ်။ အဲဒီတော့ ဒီအမှတ်စက်လေးတွေက ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အနာဂတ်ကို ဆက်စပ်ပုံဖော်ပေးမယ့်အရာတွေလို့ ယုံကြည်ကြရမယ်။ ခင်ဗျားတို့ဟာ တစ်ခုခုကို ယုံကြည်ကြရမယ်။ စိတ်ထဲမှာ အပြင်းပြဆုံးအရာ( gut ရဲ့ slang အဓိပ္ပာယ်က အများကြီးရှိတယ်။ သတ္တိစွမ်းရည်၊ မရှိမဖြစ်လိုတဲ့အရာ၊ စသဖြင့်) မျှော်မှန်းချက်ပန်းတိုင်၊ ဘ၀၊ ကံတရား၊(ကမ္မ)၊ တစ်ခြားအရာတစ်ခုခု၊ ဘာကိုပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခုကိုတော့ယုံကြည်ကြရမယ်။ ဒီနည်းလမ်းဟာ ကျွန်တော့်ဘ၀မှာတော့ တစ်ခါမှ မရှုံးနိမ့်စေခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော့်ဘ၀ကို အပြောင်းအလဲများစွာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
(နောက်ထပ်ပုံပြင်တွေကို တနင်္လာနေ့မှာဆက်ပါမယ်။ ပျော်ရွှင်သော သောကြာနေ့ဖြစ်ကြပါစေကြောင်း ...)
F.Y.I (English Version I referenced)
And 17 years later I did go to college. But I naively choseacollege that was almost as expensive as Stanford, and all of my working-class parents’ savings were being spent on my college tuition. After six months, I couldn’t see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life and no idea how college was going to help me figure it out.
And here I was spending all of the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out OK. It was pretty scary at the time, but looking back it was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out I could stop taking the required classes that didn’t interest me, and begin dropping in on the ones that looked interesting.
ဆာလောင်၊ရူးသွပ် သွားလေသူကြီး အမှတ်တရ။ (ပထမပုံပြင်)...
အ၀ါရောင်လိပ်ပြာများ၏ တောင်ပံတွင် ဆေးမင်ထိုးထားသည်။...